आठ महिनामा ११ अर्बको तरकारी आयात ! – Krishakkhabar
आठ महिनामा ११ अर्बको तरकारी आयात !
Sunday, April 3rd, 2022 | krishak khabar
काठमाडाँै २० चैत्र
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ८ अर्बको तरकारी आयात भएको तथ्यांक छ । आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को फागुन मसान्त सम्ममा ११ अर्ब ५२ करोड ९५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबर आलु, प्याज र गोलभेँडा भारत, चीन, बङ्गलादेश तथा इन्डोनेशियाबाट आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।
झण्डै ६५ प्रतिशत मानिस आबद्ध कृषि पेशमा आश्रित भनिएको देशमा घरघरमा अत्यावश्यक पर्ने तरकारी अन्य मुलुकबाट आयात गरी भान्सा तयार गर्नुपर्ने भएपछि कृषि प्रधान मुलुकभन्दा आफैँमा लाजमर्दो विषय बन्दै गएको छ ।
सबैभन्दा धेरै आलु भारतबाट ६ अर्ब ५६ करोड ४६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ र बङ्गलादेशबाट २४ करोड ८१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ गरी कूल छ अर्ब ८१ करोड २८ लाख दुई हजार मूल्य बराबरको आयात भएको छ । भारतबाट २५ करोड ८१ लाख ३२ हजार ८३७ र बङ्गलादेशबाट एक करोड ४६ लाख ३८ हजार ८०० किलो आलु आयात भएको छ ।
सोही अवधिमा चार अर्ब ३० करोड ५४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ मूल्यको प्याज भारत र चीनबाट आयात भएको छ । भारतबाट ११ करोड ५५ लाख ३२ हजार ६८७ किलो र चीनबाट ७३ हजार ६८० किलो प्याज आयात भएको हो ।
गत साउनदेखि फागुनसम्मको आठ महिनाको अवधिमा ४१ करोड १३ लाख ५६ हजार मूल्यका गोलभेँडा आयात भएको छ । भारतबाट ४१ करोड १३ लाख ४५ हजार र इन्डोनेशियाबाट ११ हजार मूल्यका गोलभेँडा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
सो अवधिमा भारतबाट तीन करोड ८० लाख चार हजार ३३९ किलो र इन्डोनेशियाबाट ६२५ किलो गोलभेँडा आयात भएको छ । इन्डोनेशियाको गोलभेँडा सलादका लागि आयात भएको हो । तीनथरि तरकारीको आयातलाई तथ्याङ्कका रूपमा केलाउँदा गोलभेँडाको उत्पादनमा भने प्रगति हुँदै गएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी दुई वर्ष अर्थात् आव २०७७र०७८ बाट प्रमुख तरकारी बालीमा नेपाल पूर्णआत्मनिर्भर हुने घोषण भएको थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आव २०७४र७५ बाट सुरु भएको हो । परियोजना आव २०८२र८३ सम्म सञ्चालनमा रहने परियोजना व्यवस्थापन एकाइले जनाएको छ ।
नेपालका सबै जिल्लामा आलुखेती गरिन्छ । आलुखेती हुन थालेको २०० देखि २५० वर्षको इतिहास छ । आव २०७६र७७ को सरकारी तथ्याङ्कानुसार एक लाख ८८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा आलुखेती भई वार्षिक ३१ लाख ३१ हजार ८३० मेट्रिक टन आलु उत्पादन भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
प्याजखेतीमा नाफा नदेखेर किसान आकर्षित हुनसकेका छैनन् । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा लगभग तीन लाख मेट्रिक टन प्याज उत्पादन भएको तथ्याङ्क छ ।
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा भारत र चीनबाट एक लाख १५ हजार ६०६ मेट्रिक टन प्याज आयात भएको हो । नेपालीका लागि उत्पादन र आयातलाई हेर्दा झण्डै चार लाख १५ हजार ६०६ मेट्रिक टन प्याजको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । स्रोत ः रासस
TOTAL PAGE VIEWS: 1044693